सुनकाेशीमा पानीकाे हाहाकार ! – www.visionfm.org
ON AIRनारी आवाज(पुनः प्रशारण)
सुनकाेशीमा पानीकाे हाहाकार !
पानी अभावले पुनर्निर्माण प्रभावित
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५ समय: १२:२६:२३
- एसबी जेराे
ओखलढुंगा- सुनकोशी गाउँपालीका–१ भिरगाउँका रामबहादुर मगर (७३) घर नजिकै पानी आउदा निकै खुशी भएका थिए । उकालो गाउँ सम्म पानी आउदा गाउँबासी लाई अचम्म लागेको थियो । घर–घरमै पानीको सुविधा पाउँदा भिरगाउँका सम्पुर्ण स्थानियहरु हर्षित मात्र भएनन् रातदिन खानेपानी ओसार्ने दुःखको दिन गएको महशुस गरे । गाउँको मुहार फेरियो ।
तर त्यो खुशीले निरन्तरता पाउन सकेन । घरमै पानीको सुविधा पाएर खुशी भएका भिरगाउँबासीहरु अहिले फेरी खानेपानी अभावले सास्ती भोगिरहेका छन् । तिनै रामबहादुर अहिले गाउँमा पानीको अभाव भए पछी बढी दुखित र चिन्तीत बनेका छन् । उनी भन्छन ‘गाउँमा खानेपानीको अभाव छ, मानिस लगायत पशु चौपायलाई समेत समस्या भयो’। वनजंगलको विनाशका कारण पानीको मुहान सुक्नथालेको उनको बुझाई छ । करिब चार वर्ष अघि वैकल्पीक उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था रिमरेक र गाविस तथा स्थानिय संघसस्थाको ३० लाख लगानिमा ओडारे जोर धारा सौर्य उर्जा खानेपानी आयोजना सन्चालन भएको हो । आयोजना सन्चालन भएको करिब दुईवर्ष पछी खानेपानीको मुहानै सुकेपछी भिरगाउँमा फेरी खानेपानीको समस्या दोहोरिएको हो ।
ओडारेबाट दुई सय छ मिटर उकालो सोह्रंगना आधारभुत विद्यलाय सम्म सौर्य उर्जाको सहायताले मोटर पम्पीङ प्रविधी मार्फत खानेपानी उकालो तानिएको थियो । अहिले पानीको मुहानै सुके पछी खानेपानीको अभाव श्रृजना भएको हो । पानी तान्ने उपकरणहरु सुरक्षीत छन् । आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सुनकोशी पारी पञ्चकन्या बाट फलामे पाईप ओसारेको स्मरण गर्दै मनमाया मगरले भन्नुभयो ‘घरमै खानेपानीको सुविधा पाउने आसाले कोशी पारी पञ्चकन्याबाट फलामे पाईप बोकियो, सुनकोशीबाट बालुवा पनी ल्याईयो, तर अहिले खानेपानी छैन, दुःख पाईयो’ । उनी भन्छीन ‘केहि वर्ष अघि सम्म हामीलाई स्वर्ग जस्तै थियो, घरमै पानी आईपुगे पछी साग सब्जी तरकारी पनी लगाईयो, तर अहिले फेरी हामीलाई समस्या भयो’। बस्ती भन्दा करिब एक,डेढ घण्टा टाढा रहेको सानो पानीको मुहान बाट भिरगाउँका ५५ घरपरिवारले खानेपानीको अभावलाई टार्दै आएका छन् । एक दिनमा प्रति घर परिवारले दुई गाग्ग्री पानी भर्न पाउँछन ।
खानेपानीको अभावलाई जेनातेना गुजारेका स्थानियहरुलाई अहिले भूकम्प पुन निर्माण कार्यले थप समस्यामा परेका छन् । अहिले गाउँमा एकै पटक २६ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु बनिरहेका छन् । घर बनाउन पानीको अभाव छ । ट्र्याक्टर बाट पानी ओसारेर घरहरु पुन निर्माण भईरहेका छन् । छिमेकी वडा सिस्नेरीबाट ट्र्याक्टर मार्फ पानी ओसारेर घर निर्माण गरिरहेको प्रमिला मगरले बताईन । ‘एक घण्टा टाढाबाट गाग्री, डूम बाट बोकेर घर आधा बनाईयो, अहिले पानी किनेर घर बनारहेका छौ, अझ घर सकिन बाँकी छ’ । छ हजारको पानी किनीसकेको उनले बताईन । घर अझै सकिएको छैन ।
२४सैँ घण्टा गाउँ नजिक रहेको कुवा तथा सानो धारामा पानी भर्ने स्थानियको भिड लाग्ने गरेको देवीमाया मगरको भनाई छ । ‘रात दिन सबैले पालै पालो पानी भर्ने गरेका छौँ, रातमा पानीकै मुहानमा बास बस्छौँ’। देबीमायाले भनिन ‘रात भरी गफ गर्दै पानी भर्छम, ओड्ने लगेर त्यही सुत्छौँ, कोही त डोकोमा पसेर सुत्छन्’। ‘राती ८ बजे जानेको पानी भर्ने पालो विहान १ बजे आउछ’ उनले भनिन । घर पुन निर्माण गर्नकालागी ट्र्याक्टर मार्फत पानी ओसारेको देविमायाको भनाई छ । भक्तमाया मगरको पनी देवीमायको जस्तै समस्या छ ।
पानी अभावले भिरगाउँका स्थानिय दिनमा भोक न रातमा निन्द्रा भनेझै भएका छन् । ‘दिन भरि घर बनाउछौँ, राती पानी थाप्न पधेँरो जान्छौँ’। खलिमाया मगर भन्छीन ‘ढुंगा, माटो, बालुवा, सिमेन्टको काम गर्नुपर्छ राती पानी थाप्न पधेँरो’। अधिकाँश स्थानियको दैनिकी यसरीनै बितिरहेको छ । भिरगाउँकी ७० वर्षिय नरिमाया मगरको पनी दैनिकी यस्तै छ । पानी लिन उनि आफै मुहानमा जान्छीन । उनले भनिन ‘लौरो टेकेर म आफै पानी लिन जान्छु, नगए घर बनाउन त के खान समेत पाईन्दैन, साह्रै दुःख पाईयो’। गाउँ नजिकैको मुहानमा पानी थाप्न पालो लगाईएको छ । कसैको पालो दिनमा, कोहिको राती आउने सोमबहादुर मगरले बताए । ‘पिउने पानीकै अभाव छ नुहाउने त कुरै छाडौ’। उनि भन्छन ‘ननुहाएको वर्षौ भयो, मान्छे अगाडी जानै अप्ठ्यारो लाग्छ’ । उनका अनुसार २०७२ सालको भुकम्प पश्चात पानीको मुहान सुके पछी भिरगाउँमा खोपानीको अभाव भएको हो । पुन निर्माणका लागि सिस्नेरीबाट पानी ल्याईएको छ । पानी ओसार्दा, बालुवा किन्दा भिरगाउँमा पुन निर्माण महंगो भएको सोमबहादुरले बताए । एउटा घर सकिदा ५ लाख भन्दा बढि खर्च लागेको स्थानियको भनाई छ । सुनकोशी गाउँपालीकाका प्रमुख रुद्रप्रसाद अधिकारीले भिरगाउँमा पानिको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने ‘भिरगाउँमा पानी पु¥याउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो, जसरी पनी व्यवस्थापन गर्छौ’।
सुनकोशीको बलखुमा मात्रै होईन ओखलढुंगा जिल्लाभर नै खानेपानीको अभाव बढेको छ । जिल्लाका सबैजसो नगर तथा गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको हो ।
सदरमुकाम सहित जिल्लाका सबैजसो स्थानमा खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको छ । सिद्धिचरण नगरपालिका, मानेभञ्ज्याँ गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र चम्पादेवी गाउँपालिका र मोलुङ गाउँपालिकामा खानेपानीको बढि समस्या छ ।